Barlamaanka Burundi oo meel mariyay sharci cusub oo dhigaya in la siiyo madaxweynaha ka tagaya xilka guri qasri ah – Bandhiga
Barlamaanka Burundi oo meel mariyay sharci cusub oo dhigaya in la siiyo madaxweynaha ka tagaya xilka guri qasri ah
Baarlamaanka Burundi ayaa meel mariyay sharci cusub oo dhigaya in la siiyo madaxweynaha ka tagaya xilka guri qasri ah oo nooca raaxada iyo inkabadan 500,000 oo doolarka Mareykanka marka uu waqtigiisa Dhamaado.
Mooshinkan la meel mariyay ayaa imaanaya iyadoo shacabka Burundi ay isku diyaarinayaan doorasho guud oo dhaceysa bisha May ee Sanadkaan.
Madaxweyne Pierre Nkurunziza ayaa sheegay in uu loolami dooni marka ay dhamaato mudo Xileedkiisa.
Sanadkii 2015-kii ayaa dalkaan ku yaal koonfurta Afrika waxaa hareeyay qalalaase balaaran kadib markii mucaaradka ay ka biyo diideen in mar sadaxaad uu xilka qabto Pierre Nkurunziza.
Sharcigan qabyada ah oo la horgayn doono golaha wasiirrada si ay u ansixiyaan ayaa sidoo kale waxa uu madaxweynaha u ogolaanayaa mushaar uu qaadan doono inta uu nool yahay.
Waxaa sidoo kale la soo jeediyay in Mr Nkurunziza loo doorto xilka “hogaamiyaha ruuxiga” markii uu xilka madaxweynenimada banneeyo bisha May.
Burundi ayaa 2015-kii waxa ay gashay qalalaase dhinaca dastuurka ah kaddib markii Nkurunziza uu markii saddexaad oo xiriir ah uu u tartamay xilka madaxtinimada.
Tallaabadaas ayaa waxa ay dhalisay dibadbaxyo qalalaase wata oo ay ku dhaqaaqeen taageerayaasha mucaaradka taas oo markii iskubadeshay weerraro kacdoon ah.
Sanadkii aynu ka soo gudubnay guddi uu leeyahay Qaramada Midoobay ayaa waxa uu dowladda Burundi ku eedeeyay xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, oo ay ka mid yihiin dil, xarig aan loo meeldayin, jir dil iyo dhibaatayn galmo.
Burundi ayaa eedahaasi ku tilmaantay “been”.
Sharcigan cusub oo ay meelmariyeen 98 xildhibaan ayna ka soo horjeesteen laba xildhibaan ayaa waxaa ka faa’iidaya madaxweynayaashii hore ee sida dimuqraadiga ah un lagu soo doortay.
Burundi's parliament has voted to pay a sum worth over
R7 million to President Pierre Nkurunziza and provide him with a luxury villa when he leaves office #sabcnews pic.twitter.com/aDDH5AHaBi
— SAfm news (@SAfmnews) January 23, 2020
“Madaxweyne awoodda kula wareegay codka koox siyaasiyiin ah lalama meel dhigi karo mid si dimuqraadi ah loo soo doortay,” ayuu yiri wasiirka cadaaladda Aimee-Laurentine Kanyana oo la hadlayay xildhibaannada golaha qaranka, wakaaladda wararka ee AFP ayaa sidaas ku warrantay.
Madaxweynaha howlgabka noqda ayaa sidoo kale waxa uu helayaa waxyaabaha la siiyo madaxweyne ku xigeenka todoba sanadood kaddib markii uu xilka banneeyo, inta noloshiisa ka dhimanna waxa uu heli doonaa kharash u dhigma midka uu qaato xildhibaanka, warbixinta ayaa sidaas tilmaantay.
Sharcigan qabyada ah ayaanan qeexayn dhaqaalaha ku baxaya iyo baaxadda uu yeelan doono guriga loo dhisayo madaxweynaha.
Diblumaasi saldhiggiisu yahay waddanka Burundi ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in qorshuhu uu yahay mid layaab leh hasayeeshee uu sidoo kale yahay tallaabo wanaagsan, sababtoo ah waxa uu tilmaamayaa in Madaxweyne Nkurunziza uusan tartami doonin doorashada 20-ka May.
Dastuur cusub oo la meelmariyay 2018-kii kaddib afti la qaaday ayaa waxa uu u ogaalanayay inuu awoodda sii hayn karo ilaa 2034.
Qorshahan dhaqaalaha badan uu ku baxaayo ayaa sikasta oo uu xaal ahaadaba waxa uu ka hor imanayaa heerka nololeed ee inta badan dadka Burundi, halkaas oo in ka badan 65% dadka ay ku nool yihiin saboolnimo, halka kala bar dadkeeda 10-ka milyan ahna aanay haysan cunno ku filan, sida ay sheegayso hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan cunnada adduunka ee WFP.
Mr Nkurunziza ayaa ah Hutu hore u soo hogaamiyay fallaago, waxa uunna noqday madaxweynihii labaad ee Burundi lagu soo doorto qaab dimuqraadi ah. Waxaa la doortay 2005-tii kaddib markii uu dhammaaday dagaalkii sokeeye.